ज्ञानेन्द्र शाह, ज्ञानेन्द्र शाही र जनमत
देखें, गोरीले सत्ताकै आडमा आफ्नो गुरुको घोर अपमान गरी । सुनें, बूढा नेता रवीन्द्रनाथ शर्मालाई अल्लारे कम्युनिस्टहरूले बेस्सरी गोरु चुटेजस्तो चुटे अरे । समाचार पढें, मेयरले दलित महिलालाई बोक्सीको बात लगाएछन् ।
प्रतिपक्ष चिच्याएका छन्, गाउँमा सिंह पुग्यो, दरबार पुगेन । करोडौंको बजेटको दुरूपयोग छर्लङ्ग देखिन्छ । तेल, खेल, पानी, खानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जहाँ–जहाँ मेरा नेता कमरेडहरू पुुगेका छन्, चोखा भेटिन गाह्रो छ । ती बिटुलो मात्रै भएका छैनन्, डुङ्डुङ्ती गन्हाएका छन् । यस्तै दुर्गन्धेहरूले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सुपरस्टार बनाइदिए । ज्ञानेन्द्र शाही जिन्दावाद ! को नारा उर्लियो । जुलुसमा प्रसस्तै मान्छेहरू बटुलिए ।
न्यायप्रियता मान्छेको स्वभाव हो, ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि अन्याय भएकै हो भन्ने आम बुझाइ छ । विरोधको स्वर सुन्नै नचाहने मण्डलेहरूले ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि अत्याचार गरेकै हुन् । सत्ताको आडमा गुण्डागर्दी गर्नेहरू सबै मण्डले हुन् । सरकारी पत्रकारहरू मण्डले जस्तै देखिए ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयको झगडाले पार्टीमा डँडेलो सल्किँदै छ । एकता ए कता हो ? जस्तो हुँदैछ । नेताका पाँच बुँदे सहमतिको अनेक अर्थ झिकिँदैछ । ईश्वर पोखरेल त्यहाँ आलोपालाको अर्थ देख्दैनन् । दुई अलग–अलग पार्टी हुँदाको अवस्थाको सहमति पार्टी एउटै हुँदा व्यर्थ भएको उनको तर्क छ । उखानले भन्छ, कुलो र कुरो जता पनि जान्छ । यसैले नेताहरू तुरुन्त–तुरुन्त भाका फेर्छन् । केवल वैयक्तिक स्वार्थ हेर्छन् ।
सहमतिलाई समयमै पार्टीको सम्पत्ति बनाउन खोजिएको भए अहिले यो कचिंगल पक्कै उठ्ने थिएन । उबेला दुई जना मात्रै मिलेर पार्टी चलाउन खोजेकै हुन् । आत्मघाती बाटो रोजेकै हुन् । जे रोप्यो त्यही फल्छ, यसैले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार ढल्छ–ढल्छ झैँ हल्लिँदै छ । प्रतिपक्षीहरू उफ्रिएकै छन् ।
झलनाथ खनाल काँग्रेस भेटिएन भन्थे, अहिले भेट्दै होलान् । माधव नेपाल चोक्टा खान खोज्दैछन्, झोलमा डुब्ने खतरा बढेको छ । ईश्वर पोखरेलको कचकच र प्रचण्डको तर्कलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एउटै डालोमा हालेका छन् ।
ज्ञानेन्द्र शाही र ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा जनमत फैलिनु नेकपाभित्रको दुर्दशा हो । कमरेडहरूको दुर्गन्धले शाही र शाहजीहरू बसाएका छन् ।
इतिहासमा कांग्रेस पटक–पटक यस्तै गल्ती दोहोर्‍याउथ्यो । गणेशमानले आफ्ना भतिज दुर्गेसमानलाई राजदूत बनाइदिन गिरिजासँग आग्रह गरे, गिरिजाले टेरेनन् । भारतेली राजदूतले गिरिजालाई सम्झाइदिए । यहीँदेखि नेपाली काँग्रेसको हाल बेहाल हुँदै गयो । अहिले पनि शेरबहादुर देउवा भारतका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरलाई बधाई दिन साह्रै हतारिए ।
कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल गरेनन् । कांग्रेसमा राजावादी बहुमत ह्वात्त बढ्यो । अस्ति २०७६ जेठ १८ गते नरहरि आचार्य पोखरा आएका थिए । उनले ‘गणतन्त्रको यात्रा’ पुस्तकको चर्चा गरे । गणतन्त्रको फूल कांग्रेस पार्टीमा ओइलाइसकेको छ । शशांक कोइराला पूर्व राजाका पाउमा लुट्पुटिँदै छन् ।
बेस्सरी बलशाली छँदाको गिरिजाप्रसादको दम्भ र अहिलेका खड्गप्रसाद ओलीज्यूका घमण्ड उस्तै–उस्तै छ । खड्गप्रसाद ओली प्रचण्डलाई छेऊ लगाउन उद्यत छन् । यही बुझेर प्रचण्डले गोप्य सहमतिको पत्रलाई तुरूपका रूपमा फाले । यही मौकामा आफ्ना कमजोर पत्ती सडाएर केही नेता ‘सर’ खोज्दै छन् । पोखरामा रुद्रबहादुर थापा प्रायः मुक्तक सुनाउँछन्:
‘धेरै खाँदा अमृत पनि जर हुँदो रहेछ,
मिस्सी र बास्सालाई एक्काले अँठ्याएपछि
गुलाम पनि सर हुँदो रहेछ ।’
केपी र पीकेजस्ता मिस्सी र बास्साहरू जयशंकररूपी एक्काले अँठ्ठिए भने पूर्वराजाका गुलामहरू अवश्य सर हुन्छन् । कमल थापा पोखरामै आएर गर्जिए, ‘राजा र विप्लव दुवै अटाउने व्यवस्था चहियो ।’ स्पष्ट छ, फेरि राजा चाहियो । पढ्यौं हामीले इतिहासमा, क्रमबेलले बेलायतमा राजालाई फाँसीमा चढाए, तर ११ वर्षपछि फेरि राजतन्त्र बिउँझियो । नेपालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हिमानी र हृदयेन्द्रलाई अगाडि सारेर राजनीतिको सुतीखेती गरिरहेका छन् ।
बिरालो सेतो होस् कि कालो होस् त्यसको काम मुसा मार्नु हो । आमकिसानले मुसो मार्ने बिरालो खोजेका छन् ।
जुन स्वभाविक हो । गोरीले सत्ताको आडमा गुरु नचिन्नु, केपीले पीकेलाई छिर्के हान्न खोज्नु, राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई घुँडा टेकाउनु स्वाभाविक होइन । यसैले पार्टी कार्यकर्ता र आमजनतामा निराशाको बादल मडारिएको छ । पूर्व राजाको सम्मानमा ठूल्ठूला जुलुस उर्लिएका छन् । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ !’ का नारा घन्किएका छन् ।
ज्ञानेन्द्र शाही र ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा जनमत फैलिनु नेकपा भित्रको दुर्दशा हो । कमरेडहरूको दुर्गन्धले शाही र शाहजीहरू बसाएका छन् । बिरालो सेतो होस् कि कालो होस् त्यसको काम मुसा मार्नु हो । आमकिसानले मुसो मार्ने बिरालो खोजेका छन् ।
जेठ २६, २०७६ मा प्रकाशित
वामपन्थी विचारक भण्डारी पोखरामा रहेर समसामयिक विषयमा लेख्छन् ।
सूचनाको हकको प्रयोगले खोजी पत्रकारितामा ल्याएको क्रान्ति !
शी चिनफिङको नेपाल भ्रमणले ल्याएको तरंग
मृत्युशय्यामा भूमण्डलीकरण !
शी सफलताले जन्माएको प्रश्न : आर्थिक शक्ति मात्रै सार्ने कि विश्व व्यवस्था फेर्ने ?
भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार अभियान थालौं
दालचिनीमा मह मिसाएर खानुस्, फाइदै फाइदा पाउनुस् दालचिनी प्रायः सबै घरमा पाइने मसला हो । यसमा भएका गुणले स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुवैलाई फाइदा गर्छ । अझ यसमा मह पनि मिसाइयो भने त यसको असर दुईगुणा बढ्छ । यसका यस्ता फाइदा हुन्छन् : ...
भारतीय नागरिकता प्रकरणमा बोले देवेन्द्रराज कँडेल
पेट्रोलपम्पमा सिलबन्दी, यसरी भयो ठगी
युवतीलाई कुकुरमार्फत वलात्कार गराइएको भन्ने समाचारबारे बोल्यो सेना
जाममा रिसाउने बानी छ ? ‘हर्ट अट्याक’ होला